Bedelka Music, videos iyo sawiro ka Computer si ay iPod
Sidee kuu soo gudbin karaa Music, videos iyo sawiro ka Computer si ay iPod
> Resource > iPod > Sidee kuu soo gudbin karaa Music, videos iyo sawiro ka Computer si ay iPod
U qaado in aad tahay user cusub iPod iyo aqoon Lugood. Sidaas darteed, waxaa laga yaabaa kuwo ku adag in aad wareejiso photos, videos iyo music ka computer si iPod. Ama, waxaad tahay daal kaliya la isticmaalayo Lugood si hagaagsan music, videos iyo sawiro aad iPod. Maxaa yeelay, marka Lugood si toos ah u hagaagsan music, videos iyo sawiro si aad iPod, music hore, videos iyo sawiro laga tirtirayaa. Maxaa dhacaya haddii aadan dooneynin inuu waayo kuwa hore marka ay qabanayaan u hagaagsan ah?
Nasiib wanaag, waxaad heli kartaa computer ah in suuqa kala iibsiga iPod, in uu yahay, Wondershare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) . Haddii aan Lugood, waxa aad awoodi kartaa in aad nuqulka music, sawiro iyo videos ka computer si toos ah iPod. Waa maxay dheeraad ah, oo waa inuusan marna tirtirtaa songs, filimada iyo sawirada aad iPod. Sidaas darteed, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka si ammaan ah.
Sidee si ay u gudbiyaan videos, sawiro iyo music ka PC in iPod
Tallaabada 1. Daahfurka PC si kala iibsiga iPod
Si aan ku bilaabo, rakibi iyo abuurtaan TunesGo. Connect aad iPod si aad u computer via cable USB ah. Marka uu ku xiran, TunesGo aqoonsan doonaa iPod sida ugu dhaqsaha badan. Markaas, aad iPod la tusay doonaa interface ugu muhiimsan sida shaashadda hoose wuxuu muujinayaa:
Fiiro gaar ah: TunesGo taageertaa macruufka 5.0 iyo ka dib, oo ay ku jiraan arrimo 9. Waa si buuxda u la jaan qaada iDevices badan, sida iPod xiriiri 5, iPhone 5s iyo iPad mini. Si aad u hesho liiska oo dhan iDevices taageeray, waxaad riixi kartaa iDevices taageerayaan .
Tallaabada 2. Nuqul music, videos iyo sawiro ka computer si iPod
Markaas, guji "Media", khaanadda tagay. Guji "Music" furmo warbaahinta. Tani waxay keeni doonaa suuqa kala music ah. Markaas riix saddexagalka "Add"> "Add File" ama "Add Folder" hoos. Raadi si aad music doonayay oo dajiyaan in aad iPod.
Ka dib markii aad ka soo dhoofsadaan computer music, in aad wax playlist aad iPod dhoofin karo music.
Si aad u dajiyaan videos ka computer si iPod, guji "Media"> "Movies"> saddexagalka "Add"> "Add File" ama "Add Folder" hoos. Dul meeshii aad badbaadin videos oo iyaga soo dhoofsadaan.
Haddii aad doonayso in aad nuqul ka photos in iPod, kaliya aad u baahan tahay inaad guji "Sawirro" in guddi ka tagay. Waxay kuu soo celin doonaa xagga daaqaddii sawirka. Markaas, guji saddexagalka hoos "Add" si ay u doortaan "Add Folder" ama "Add File" in ay sawiro wareejiyo si aad iPod.
Si wanaagsan baad yeeshay! Music, videos iyo sawiro on your computer wareejiyo aad iPod si guul leh. Hadda, ku raaxaystaan ​​oo iyaga mahad on your iPod.
Marka la barbar dhigo Lugood, TunesGo aad ka bixin hab soo jiidasho leh ka fudud oo ka waxtar leh, ma waxa ay? Marka laga reebo music kala iibsiga, videos iyo sawiro, waxa kale oo aad dajiyaan karaa Podcast, audiobook iyo bandhigyada TV oo dheeraad ah. Isla mar ahaantaa, computer si kala iibsiga iPod maamuli kartaa iPhone iyo iPad iyo sidoo kale iPod. Maleh haddii aad rabto in aad maamuli warbaahinta, xiriirada iyo sawiro ku saabsan iPhone ama iPad, waxaa gebi ahaanba kuu shaqeeya.
Sida loo hagaagsan iPod in Computer New
Ka Mac formatted iPod Bedelka Music inay PC Windows
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod in USB Flash Drive
Sida loo Delete Photo Library ka iPod
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod xiriiri in Computer